GỤỌ NKE Abkhaz Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kachin Kikamba Kikongo Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mongolian Moore Myanmar Nepali Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tongan Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Mgbe Jizọs nọ n’ụwa, ndị mmadụ boro ya ebubo na ọ na-eme ka ya na Chineke ọ̀ hà. (Jọn 5:18; 10:30-33) Ma, o nweghị mgbe Jizọs kwuru na ya na Chineke hà. Kama, ọ sịrị na ‘ nna ya ka ya ukwuu. ’—Jọn 14:28.
Ndị mbụ soro ụzọ Jizọs enweghị mgbe ha chere na Jizọs na Chineke hà. Dị ka ihe atụ, Pọl onyeozi kwuru na mgbe Chineke kpọlitechara Jizọs n’ọnwụ na ‘ o buliri ya elu ka ọ nọrọ n’ọkwá ka elu. ’ O doro anya na o nweghị mgbe Pọl chere na Jizọs na Chineke hà. Ọ bụrụ na o chere otú ahụ, ọ gaaraghị ekwu na ọ bụ Chineke buliri Jizọs n’ọkwá.—Ndị Filipaị 2:9.